Noana Sady An-dàlana Ho Any An-tanànan’i Meksika? Mivingita ‘Harona Tacos ‘ · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 28 Jona 2015 5:25 GMT
Vakio amin'ny teny English, বাংলা, Nederlands, Español
Mampiavaka sy toetra manokan'ny tananan'i Meksikô, renivohitr'i Meksika, ireo sakafo vitsivitsy toy ny tacos de canasta na harona tacos, fantatra ihany koa amin'ny hoe tacos sudados na sweaty tacos. Amidy manerana ny tanàna anatin'ireo harona mahazatra ny sakafo, ny ankamaroany milahatra anatinà plastika mangamanga sy taratasy famonosana mba hitazonana ny hafanàny.
Tamin'ny volana lasa, namerina namoaka lahatsoratra iray mahaliana avy amin'ny mpiara-miasa Public Radio International ny Global Voices, mikasika ny fifandraisana misy eo amin'ny tacos al pastor sy ny shawarma, ary ny fiavian'izy ireo avy tamin'ny andron'ny Fanjakana Ottoman. Ary taona vitsivitsy lasa izay, nanoratra lahatsoratra mikasika ny sakafo mampiavaka an'i Argentina i Laura Schneider mpiara-miasa aminay – isak'izay mamaky an'io izahay, mieronerona ny kibonay ary tsy afaka ny tsy hitelin-drora manoloana ny asado (hena nasaly – natono).
Mba hanohizana ny fitrandrahana ireo sakafo avy ao Amerika Latina, andao jerena ireo harona tacos, izay zavatra kely, mofo tortillas madinika misy karazana hena sy legioma natao saosy nasisika ao anatiny. Araka ny nentim-paharazana, ireo sesika natao saosy amin'ireo harona tacos dia misy tavin-kisoa, adobo, tsaramaso natao saosy amin'ny arôma, ary ovy miaraka amin'ny “saucisson”. Ireo harona sasany mety ahitana karazany maro, miaraka amin'ny akoho tacos amin'ny saosy maitso na cochinita pibil (kisoa natao tamin'ny afo malefaka).
Efa ho herintaona lasa izay, nanao izao fanamarihana manaraka izao i José Ignacio mikasika io sakafo asiantsika resaka io tao amin'ny sampana lakozia an'ny tranonkala ara-kolotsaina Arca:
Manonona singa fototra iray ao anatin'io sakafo io i José Ignacio: ny tavy hita ao aminy, izay amin'ireo tolotra sasany, dia avy amin'ny tavin-kisoa nampiasaina tamin'ny fikarakarana azy, tsy isalasalana fa singa iray izay mampiasa loha ireo Meksikana mpahay momba ny sakafo sy ireo mpitsabo fo. Tsara ny manamarika fa araka ny torohay ofisialy nozarain'ny distrika federalim-panjakana, hatavezana sy lanja tafahoatra no tena olana fototra ho an'ny fahasalamam-bahoaka any Meksikô. Ny marina, miatrika ny olana henjana indrindra momba ny hatavezana an'ny Amerika Latina ny firenena, araka ny voalazan'ny Forbes.
Fa hoavelantsika ho amin'ny fotoana manaraka ny adihevitra mikasika ny olana ara-pahasalamana ary hovelabelarintsika kosa ny fiavian'ireo tacos ireo. Tao amin'ny lahatsoratra iray an'i El Memo tao anaty gazetiboky Chilango ety anaty aterineto, manamafy ny mpanoratra fa marobe ireo harona tacos jifaina eto andrenivohitra no namboarina avy any amin'ny faritra kely afovoany-atsinanan'i Tlaxcala, indrindra any San Vicente Xiloxochitla:
17 ora izayKiobà